Maraykanka Oo Muwaadiniintiisa Ugu Baaqay Inay Degdeg Uga Baxaan Dalka Ethiopia - Xogside-news
Home WARARKA CAALAMKA Maraykanka oo muwaadiniintiisa ugu baaqay inay degdeg uga baxaan dalka Ethiopia
Maraykanka oo muwaadiniintiisa ugu baaqay inay degdeg uga baxaan dalka Ethiopia
Safaaradda Maraykanka ee Addis Ababa ayaa digniin ay Jimcihii soo saartay ugu baaqday muwaadiniinteeda inay sida ugu dhaqsaha badan uga baxaan Itoobiya.
Arrintan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo laga cabsi qabo in xooggaga mucaaradka ay gudaha u galaan caasimadda Addis Ababa.
Digniinta Maraykanka ayaa ku soo beegmaysa xilli ay sagaal urur oo mucaarad ah Washington uga dhawaaqeen isbahaysi ka dhan ah xukuumadda Abiy Axmed.
Maxamuud Ugaas oo ku hadlayay magaca urur la baxay Somali State Resistance kana mid ah isbahaysiga ayaa sheegay inay Abiy xukunka uga tuuri doonaan “xoog ama wadahadal”.
Xooggaga Tigray ee la dagaallamaya dowladda Itoobiya ayaa maalin ka hor sheegay inay diyaar u yihiin gelitaanka caasimadda Addis Ababa, walow aysan dooneyn inay xukunka la wareegaan.
Sarkaal sare oo Maraykan ah ayaa sheegay in gelitaanka Addis Ababa ay meel adag gaarsiin doonto xaaladda bani’aaddannimo ee hadda ka taagan Itoobiya.
Previous articleTallaal boqolkiiba 90 yareynayo kansarka ku dhaca minka dumarka
Next articleWaa kuma Soomaaliga ka mid noqday isbahaysiga ka dhanka Abiy Axmed?